Iflethi okanye indlu ekwicomplex evulekileyo eDowntown - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex evulekileyo eDowntown
Iflethi entle kumgangatho wokuqala ngaphandle kwelifti yebhotwe elihloniphekileyo eliziimitha eziyi-45 square , embindini wesixeko. Le flethi ikwindawo entle kakhulu neyaziwayo eChieti, ibe "igadi yasekhaya" yenye yezona ndawo zintle zaseChieti (Pande Gconfirmation.Vico) ayibizi kakhulu, ngokwenene sikwisitrato esiyintloko sesixeko .
Iflethi inendawo YOKUMISA IIBHASI (umgca 1) efikelela kwiYunivesithi nakwiSibhedlele kwimizuzu eyi-10, uhamba nje umzuzu oyi-1.
.. inekhitshi elincinci , IGUMBI LOKUHLAMBELA eline-spa SHOWER kunye nendawo evulekileyo equka indawo yokuhlala enesofa (isofa ekwayibhedi elala abantu ababini), itafile evulekileyo, ikhabhathi yeTV, i-Hi-fi stereo, ithivi, indawo yokulala enxibe iwardrobe enkulu kunye nebhedi elala abantu ababini.
----English le language --.. yenziwa yikhitshi, igumbi lokuhlambela eline-spa YESHAWA ne-CROMOTERAPIA kunye nendawo evulekileyo equka ikona yegumbi lokuhlala elinesofa (isofa ekwayibhedi elala abantu ababini), itafile evulekileyo, ikhabhathi yeTV, i-Hi-Fi stereo, ithivi, ikona yasebusuku enekhabhathi evulekileyo kunye nebhedi elala abantu ababini.
Inethiwekhi YE-WI-FI iyafumaneka xa ICELWA kunye neendleko ezongezelelweyo.
4.64 · Izimvo eziyi-129
Iflethi isembindini yindawo yokuphosa amatye kuyo yonke into! Indawo yemidlalo yeqonga , iimyuziyam, iivenkile, iibhari kunye neevenkile zokutyela.
----English le language --- Iflethi isembindini
wedolophu kwaye ikufutshane kwinto yonke! Indawo yemidlalo yeqonga,ipaki, iimyuziyam, iivenkile, iibhari kunye neevenkile zokutyela.
Ukuba bayayinqwenela kakhulu!
Baya kukuvuyela ukufuna!